Dowlada Syria oo ku eedeysay Maraykanka in ay hurinayso qalalaaso ka dhaca dalkeeda. – SBC
Dowlada Syria oo ku eedeysay Maraykanka in ay hurinayso qalalaaso ka dhaca dalkeeda.
Posted by editor on Julaay 8, 2011 Comments
Wasaarada arimaha dibada Syria ayaa ku eedeysay Dowlada Maraykanka in ay hurinayso qalalaaso ka dhaca dalkeeda,kadib booqashadii Safiirka Maraykanka ee dalkaasi Robert Ford uu tagay Magaalada ay banaabaxyada xoogan ka socdaan ee Xamaah.
Syria waxaa ay sheegtay in Maraykanku uu fara galin qaawan ku hayo dalkooda,iyadoona uu abaabulayo dad fidna wadayaal ah oo isku dayaya in ay ceeb u keenaan kala dambaynta iyo weliba amaanka ka jira wadanka Syria.
Maraykanka ayaa sheegay in booqashada Safiirkooda ee Xamaah uu yahay mid ay ugu muujinayaan banaabaxayaasha sida ay ugu taageersan yihiin isbadalada ay doonayaan.
Ciidamada Amaanka Syria oo ku gaashaaman dabaabadaha dagaalka ayaa ku hareeraysan Magalada Xamaah,iyadoona Maanta oo jimca ah la filayo in ay goobtaasi ka dhacdo banaabaxii ugu xooganaa.
Magaalada Xamaah ayaa kamid ah Magaalooyinka ay banaabaxyada ugu balaaran Syria ay ka dhacayeen mudooyinkii ugu dambeeyay,waxaana haatan tiradii ugu dambaysay dhimashada deegaankaasi la sheegayaa in ay 20 kor u dhaafayso.
Hay ada caalimiga ah ee Xuquuqda Aadanaha Amnest International waxaa ay maalin kahor sheegtay in dhibaatayn bini aadanimo tii ugu xumayd ay ka dhacday Xamaah,iyadoona ciidamada Syria ay si toos ah u abaarayaan shacabka banaabaxaya.